SAVOROVORO AO AMBANJA : Misy mahitahita mitetika haka ny Mosquee Djamaat Tawhid
Mandra-pisian’ny filaminana dia tsy azo atao ny manatanteraka « Swalat Djoumaan » ao amin’ny « Mosquée Djamaat Tawhid ». Izay ny didy na « ordonnance » navoakan’ny prezidan’ny Tribonaly any Ambanja taorian’ny savorovoro, izay niseho tamin’ny zoma 11 mey teo tao anatin’izany « Mosquée » izany ka naharatrana olona. 5 juin 2018
Tsy nahafaly ary toherin’ny mpikambana ao amin’ny fikambanana Djamaat Tawhid izay « ordonnance » izay ary efa nampiakarin’izy ireo any amin’ny Fitsarana ambony ny raharaha. Araka ny nambaran’ireo mpikambana ao amin’ ny Djamaat Tawhid mpikambana efa voaroakan’ny birao nasionaly miisa telo noho ny tsy fanajana ny lalana anatiny mifehy ny fikambanana sy asa fanakorontanana ity farany ary tohanan’ny mpandraharaha iray ao an-toerana antsoina hoe B. sy Imam tompon’andraikitra iray ao amin’ny « Mosquée Abou Bakr » any Antananarivo no fototr’izay savorovoro niseho tao amin’ny « Mosquée Djmat Tawhid » any Ambanja izay.
Araka ny loharanom-baovao mitetika ny haka ny « mosquée Djamaat Tawhid » ity Imam sady tompon’ andraikitra ao amin’ny « Mosqué Abou Bakr » ity. Tsara ny manamarika fa ireo andian’olona manakorontana ireo dia miara-dia amin’ity farany ary ny iray amin’izy ireo izay Imam any Ambanja dia mandray karama isam-bolana avy aminy.
Misy fifandraisana amin’ny fivoriana hatao any Ambanja
Araka ny fahitan’ny mpanara-baovao sasany any an-toerana, misy fifandraisana amin’ny fivoriana izay hotanterahina any Ambanja, amin’ity volana ity, izao toe-draharaha izao. « Na tiany na tsy tiany dia tsy misy afa-tsy Imam H.M.M no ambadik’iny savorovoro tao amin’ny « Mosquée Djamaat Tawhid iny. Misy fotoana mantsy nandefa vola mitentina 140 000 000 Ariary tamin’ny tompon’ andraikitra iray eto Ambanja ity Imam ity hanamboarana Mosquée iray amoron-dalana. Tsy manana tany malalaka amoron-dalana anefa ny kaominina eto Ambanja, ka voatery nanamboarana Mosquée hafa any Ambovonamandresy any Mahajanga ilay vola. Koa satria tsy mahita toerana hanamboarana « Mosquée » eto Ambanja Imam H.M.M dia natony ny fomba rehetra miaraka amin’ireo andian’olona miara-dia aminy sy tompon’andraikitra ara-panjakana sasany eto an-toerana nanakorontana ny fikambanana Djamaat Tawhid mba hahafahany maka ny « Mosquée »-n’ity farany », hoy ny fanazavana nomen’ireo mpanara-baovao tafaresaka tamin’ny mpanao gazetinay.
« Tsy mpikambana ao amin’ny fikambanana Djamaat Tawhid ireo andian’olo nanao asa fanakorontanana tao amin’ny « mosquée », ny zoma 11 mey teo. Porofon’izany vao nivoaka iny « ordonnace » avy amin’ny prezidan’ny Tribonaly iny dia ny fanalana ny sora-baventy « Djamaat Tawhid » teo amin’ny rindrin’izany « Mosquée » izany no nataon’izy ireo voalohany », hoy hatrany ireto farany.
Na dia nampiakatra ny raharaha eny anivon’ny Fitsarana ambony aza ireo tompon’andraikitra ao amin’ny fikambanana Djamaat Tawhid dia tsy niala ao amin’ny « mosquée » ireo olona nanakorontana izany fikambanana izany sy nandratra olona. Mahitahita ry zalahy ary misy mpiaro. Tsy iza izany fa ingahy B. izay miara-miasa amin’ny Imam H.M.M. Araka ny loharanombaovao tsy ampihambahambana no nilazan’ingahy B. fa raha mbola monina ao Ambanja ny tenany dia tsy misy sahy misambotra ireo olona nandratra ny Ben’ny tanàna lefitra iray sy olon-kafa tamin’iny 11 mey teo iny sy nanakorontana ny « Mosquée »-n’ny fikambanana Djamaat Tawhid. Milaza lava tanana sy mahitahita ingahy B. Hatreto aloha ohatran’ny voamalon’ity farany tokoa ireo tompon’andraikitra sasany ara-panjakana any Ambanja. Porofon’izany na dia nametraka fitoriana ny Ben’ny tanàna lefitra iray ity noho ny daroka sy ratra nahazo azy dia tsy misy voasambotra hatreto ireo olona tompon’antoka amin’izany. Miaro azy ireo ity mpandraharaha antsoina hoe B. ity, araka ny loharanombaovao.
Voatsikera mafy ny lehiben’ny Distrika
Voatsikera mafy ihany koa ny lehiben’ny Distrika any an-toerana. Voalaza fa milefa andraikitra ity farany. « Tsy misy ny tokony hidiran’ny Fitsarana ny savorovoro misy eo anivon’ny fikambanana Djamaat Tawhid raha nandray andraikitra ny lehiben’ny distrika. Efa nahitana olana tahaka an’io tany Antsohihy sy Nosy Be ary ireo lehiben’ny distrika isany avy no namaha izany. Fa maninona ny teto Ambanja niraviravy tanana ?
Mampametra-panontaniana ihany koa ny antony naneren’ny Fitsarana ny nanaovana fifidianana izay tsy mifanaraka velively amin’ny « statut » sy lalàna mifehy ny fikambanana sy nankataovany izany. Mazava ny voalaza ao anatin’ny statut : Anjaran’ny birao nasionaly ny mankatoa ny fifidianana birao vaovao. Tsy vitan’izany tsara ny manamarika fa mbola amperinasa tanteraka ny birao izay tarihin’ny Amir Aly Mohamad ary vao tamin’ny taon-dasa no natao ny fifidianana », hoy ny mpanara-baovao iray any Ambanja. Na izany na tsy izany milaza ireo tompon’ andraikitra ao amin’ny fikambanana Djamaat Tawhid fa mahatoky ny Fitsarana malagasy ary miandry fatratra ny fanapahan-kevitra havoakan’ny Fitsarana ambony, ny alarobia ho avy izao.